Ogaden News Agency (ONA) – Bayaan: JWXO oo si adag ucam baaraysay xasuuqa ay Malleeshiyada Canfartu u Gaysatay Soomaalida.
Bayaan: JWXO oo si adag ucam baaraysay xasuuqa ay Malleeshiyada Canfartu u Gaysatay Soomaalida.
Posted by Wariye Qaran	/ January 16, 2019
Malleeshiyada Maamulka Canfarta ayaa 18 qof oo rayad ah ku xasuuqay gobolka Sitti ee deegaanka Soomaalida, markiiay taariikhdu ahayd 15 January 2019. 12 ka mid ah dadka la laayay waxaa lagu dilay meesha lagu magacaabo Dan-la-helay, afar kalana waxaa lagu dilay Cadaynta, laba kalanawaxaa lagu dilay waddada isku xidha Addis Ababa iyoJabuuti.
Maamulkii cadaadiska ku dhisnaa ee TPLF hormuudka ahaydayaa bishii September ee sannadkii 2014, ku wareejiyayMaamulka Canfarta Tuulooyinka lagu kala magacaaboCadaynta, Candhuufta iyo Garba-ciise, isagoo ka duulayadano siyaasadeed, isla markaana aan wax afti ah ka qaadindadka Soomaaliyeed ee deegaanadaas ku nool. Laga soobillaabo xilligaas xaaladdu aad ayay u kacsanayd, in kastooisku-dhacyo badani ayna dhicin, hase yeeshee markii uudhacay taliskii hore waxay dadka Soomaaliyeed billaabeeninay xuquuqdooda dalbadaan.
Lix toddbaad ka hor, malleeshiyada Canfarta ee Liyu-Haylewaxay deegaanadaas ku dileen 8 qof oo Soomaali ah, oo ka mid ahaa dadkii Soomaaliyeed ee ka qayb qaadanayaybannaabaxyo lagaga cabanayay xadgudubyada loo gaystodadka Soomaaliyeed ee ujeedada ka dambaysa ay tahay in guryohooda laga qixiyo.
Dhibaatooyinkaas ka dib, waxaa la diyaariyay guddi xaqiiqoraadis ah oo ka kooban Federaalka iyo labada maamul eedeegaanada Soomaalida iyo Canfarta, waxaana guddigaasloogu talagalay inuu tego degaanada muranku ka taaganyahay. Si go’aankan looga hortego, waxay malleeshiyadaMaamulka Canfartu qaadeen weeraradan cusub ee shacabkaSoomaaliyeed lagu xasuuqay.
Jabhadda Waddaniga Xoraynta Ogaadeenya (JWXO) waxaysi adag u cambaaraynaysaa xasuuqa ay malleeshiyadaCanfartu u gaysatay shacabka Soomaaliyeed, waxayna kubaaqaysaa in weerarada la joojiyo oo dhibaatada taagan lagu xalliyo wadahadal iyo hab sharciga waafaqsan.
JWXO waxay sidoo kale dowlada Federaalka ah ugubaaqaysaa inay qaado tallaabo wax ku-ool ah oo colaada lagu soo afjarayo.
Ugu dambayntii, waxay JWXO ka codsanaysaa dadkaSoomaaliyeed inay dul-qaad muujiyaan, isla markaana ay adeegsadaan dhammaan waddooyinka sharci iyo dhaqan eesuuragalka ah, si khilaafkan xal loogu helo.